Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » News » La -talinta Fulkaanaha oo laga soo saaray Hawai'i
Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Jabinta Hawaii • Kamaainas • News • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
In ka badan 140 dhulgariir ayaa ka dhacay Jasiiradda Weyn ee Hawaii tan iyo fiidnimadii shalay, Isniinta, Ogosto 23, 2021. Badankoodu waxay ku hoos jireen baaxadda 1 oo midna wuxuu ahaa 3.3
Dhulgariirradaan yaryar iyo gariirrada ayaa socday ilaa 10 gariir saacaddiiba, sabab ku filan oo bixisa la -talinta.
Kormeeraha Fulkaanaha Hawai wuxuu xirayaa la socodka dhaqdhaqaaqa godka Kilauea oo ay ka dhacaan dhulgariirrada.
Cusboonaysiinta maalinlaha ah waxaa soo saari doona Hawai'i Volcano Observatory ilaa ogeysiis dambe.
Kormeeraha Fulkaanaha Hawai ee Beerta Qaranka ee Volcanoes Hawai'i ayaa daawanaya hawsha oo si taxaddar leh kula talinaya in godka Kilauea uusan qarxin. HVO waxay sii wadaysaa inay si dhow ula socoto dhul -gariirka Kilauea, isbeddelkiisa, iyo qiiqa gaaska wixii isbeddel ah ee ku yimaada hawsha.
Qoraalkan, ma jiraan wax caddayn ah in lava ka muuqato dusha sare ee godka Kilauea, si kastaba ha ahaatee, waxaa jiray isbeddel ku yimid isbeddelka dhulka ee tiltmeters ee gobolka shir -weynaha Kilauea. Tani waxay muujin kartaa in magma ay ka soo baxeyso 0.6 illaa 1.2 mayl oo ka hooseysa caldera una dhaqaaqdo dhinaca koonfureed ee godadka.
Cadhada Pele - Goddess of volcanoes
Qof kasta oo ka socda Hawai'i ayaa kuu sheegi doona in hawsha folkaanaha ee jasiiradaha ay tahay farriin ka timid Pele, oo ah cibaado ku jirta khuraafaadka Hawaii. Iyadu waa ilaahadda dabka, hillaaca, dabaysha, qoob ka ciyaarka, iyo foolkaano.
Pele wuxuu leeyahay shaqsiyad aad u xamaasad badan oo aan la saadaalin karin oo ay ku xardhan tahay xanaaq rabshad leh, taas oo cadhadeeda ka dhigaysa qaab qarxa foolkaane. Waxay tirtirtay magaalooyinkii iyo kaymihii markii lafahu ka soo qulqulaan buuraha ilaa badda.
Legend ayaa leh inay nooshahay godka Halemaumau kulanka ugu sarreeya ee Kilauea, oo ah mid ka mid ah fulkaanaha ugu firfircoon adduunka.
Pele waxaa inta badan lagu tilmaamaa inuu yahay warwareege waxaana aragtideeda lagu soo warramey silsiladda jasiiradda boqolaal sano, laakiin gaar ahaan meel u dhow godadka folkaanaha iyo meel u dhow gurigeeda Kilauea. Aragtidan, waxay u muuqataa inay tahay gabadh aad u qurux badan oo aad u dheer ama haweeney waayeel ah oo aan soo jiidasho lahayn oo tabar daran sida caadiga ah waxaa weheliya eey cad. Legend wuxuu leeyahay Pele wuxuu qaataa qaabkan haweeney waayeel ah oo dawarsata si uu u tijaabiyo dadka - wuxuu weydiiyaa inay haystaan ​​cunto ama cabitaan ay wadaagaan. Kuwa deeqsi ah oo wax la qaybsada ayaa la abaalmariyaa, halka qof kasta oo damac leh ama aan naxariis lahayn lagu ciqaabo guryahiisa ama wixii kale ee qaaliga ahaa.
Dadka booqanaya Hawai'i waxay u badan tahay inay maqli doonaan in Pele uu habaari doono qof kasta oo ka qaada dhagxaanta lafaha gurigeeda jasiiraddeeda. Ilaa maantadan la joogo, kumanaan xabbadood oo dhagaxa lava ah ayaa dib loogu soo diraa Hawai'i socdaalayaasha adduunka oo dhan kuwaas oo ku adkaysanaya inay la kulmeen nasiib xumo iyo masiibo ka dhalatay qaadashada dhagxaanta lava.
Kormeeraha Fulkaanaha Hawai wuxuu soo saari doonaa maalin walba cusbooneysiinta Kilauea ilaa ogeysiis dambe.